feeling Archives - Page2of3- Thutazone
ကြည်နူးဆွတ်ပျံ့ဖွယ် မေတ္တာဇာတ်လမ်းတွေကိုရုပ်ရှင် ဝတ္ထု ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေကျပါ။ အချို့သော ထူးဆန်းတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေဟာ လက်ရှိလောကရဲ့ တစ်ကယ့်ဘဝတွေမှာတစ်ကယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုမျှဝေပေးမှာကတော့ အပြင်မှာတစ်ကယ်ရှိခဲ့တဲ့ ထူးထူးခြားခြား အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၀။ နှစ် ၆၀ ကြာမှ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့စုံတွဲ ဒုတိကမ္ဘာစစ်ကိုနောက်ခံထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးပါ။ ...
ခွေးတွေဟာလူတွေရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတွေဆိုရင် အားလုံးလက်ခံကြပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့လူတွေကတော့ ကြောင်လေးတွေကိုပိုချစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် သင့်အပေါ် အသက်ရှင်နေစဉ်မှာတင်မကပဲ သေသွားသည့်တိုင်အောင် အမြဲဂရုတစိုက်ချစ်ခင်နေမဲ့သူကိုလိုချင်ရင်တော့ ခွေးမွေးပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့သစ္စာရှိမှုဟာဆိုရင် သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့ သင်သေသွားတဲ့အချိန်ထိတိုင်အောင် မပျက်ပြယ်ပဲရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုပြောပြမယ့်ခွေးလေး ၄ကောင် အကြောင်းကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် သူတို့ဘယ်လောက်ထိသခင်တွေအပေါ်သစ္စာရှိရှိချစ်သွားကြလဲဆိုတာမြင်တွေ့ကြရမှာပါ။ ၅။ Kostya ရုရှားနိုင်ငံ တော့လ်ယက်တီ ...
ရေးသားသူ - ဗန်းမော်သိန်းဖေ အမေရိကန်နိုင်ငံက ဖီလဲဒေဖီးယားမြို့ရဲ့ မိုးသဲသဲမဲမဲ ရွာပြီး လေပြင်းတွေ တိုက်ခတ်နေတဲ့ ညဦးပိုင်းအချိန်ပါ။ ဟိုတယ် အသေးလေးတစ်ခုကို အသက် ၇၀ အရွယ် အဖိုးကြီးနဲ့ အဖွားကြီး လင်မယား ၂ ယောက် ...
Written By Sayar Aung Ko Lat အဲဒီတစ်နေ့၊ ငါးနာရီခွဲ ကားပြန်အပ်ရပါမယ်။ တက္ကစီ ဆရာ ဂျိုးဟာ ခေတ္တနားမည် ဆိုတဲ့ ကပ်ထူဘုတ်ကို ထောင်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ဟာ သော့ကြာနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ် ...
ဘာသာပြန်သူ -နိုင်းနိုင်းစနေ "မေကြီး... သမီးရဲ့ပစ္စည်းကို မေကြီးဘယ်နားထားလိုက်သလဲ?" ရိုးရိုးရှင်းရှင်းစကားလေး တစ်ခွန်းတည်းပါပဲ.. ဒါပေမယ့် မိခင်အပေါ် မှီခိုခြင်းတွေပါနေခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ မိဘတွေရဲ့ ကရုဏာအကြင်နာ၊ ဂရုစိုက်ပျိုးထောင်မှုအောက်ကနေ တဖြေးဖြေးကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတယ်။ "သမီး အရွယ်ရောက်နေပြီနော်.. ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်သေချာမသိမ်းဘဲ အမေ့ကို လာမေးနေသေးတယ်" ...
Written By Ko Aung Min Thein (၁) သူမ.. အပြင်မှာ နောက်ယောက်ျားလေးအသစ်တစ်ယောက် တွေ့နေတာကြောင့် အိမ်ကယောကျာ်းနဲ့ တစ်ကုတင်တည်းမအိပ်ချင်တော့ဘူး။ ဘီဒိုထဲက စောင်နဲ့ ခေါင်းအုံးအသစ်ထပ်ထုတ်ပြီး ယောကျာ်းနဲ့ကုတင်ခွဲအိပ်တယ်။ တစ်ယောက်တည်း ကုတင်အထက်မှာ ချမ်းလွန်းလို့ ...